Inona avy ireo dingana hahatongavana amin'ny fanentanana mazoto mikaroka?
Ny fikarohana ara-tsosialy (na SEO) miezaka mikaroka dia mitaky fahalalana fototra momba ny fanavaozana algorithm izay atolotr'i Google eo amin'ny fototra. Ny mpitsabo SEO tsirairay dia tokony hanana ny fahafahana manavaka ny iray amin'ireo tetikady folo efa mahazatra mba hametrahana ny tanjona farany amin'ny fiafaran'ny fampielezan-kevitra SEO. Izany fahalalana izany dia hanampy anao ho tsara kokoa amin'ny fanapahan-kevitra izay dingana tokony hataonao amin'ny SEO mahomby - cool cat casino download games software.
Ao amin'ny lahatsoratra androany, ireo manam-pahaizana ao amin'ny Semalt dia hilaza aminareo ny fomba fiasa mahomby indrindra amin'ny fikarakarana fikarohana ataon'ireo mpikaroka amin'ny 2017. Vakio ny mahafantatra azy rehetra. Ka andeha aloha.
Three Methodable SEO Methodologies You Can Use Right Now
1. Ny fifantohana amin'ny lisitry ny Semantic Index
Ny Semantic Indexing Latent, fantatra amin'ny hoe LSI, dia seho SEO iray malaza izay mamaritra ny fifandraisana misy eo amin'ny hevitra sy ny teny ao anaty votoaty. Manampy ny Google sy ny fitaovana fikarohana hafa dia manavaka ny dikan'ny teny maro sy ny andian-teny manokana.
Tsindrio fotsiny, ny LSI dia mitady ny synonyme mifandraika amin'ny teny fanalahidy ao amin'ny tranonkala.
Na dia nampiasaina nandritra ny roapolo taona lasa aza ny LSI, mbola mahasoa ity SEO androany ity. Ny teny fanalahidy LSI dia tsara amin'ny fanatsarana ny laharan'ny Google amin'ny tranonkalanao. Ankoatra izany, manatsara ny mety hitranga ny lanjan'ny loharano ao anatin'ny SERP ary hiaro ny tranokalanao amin'ny sazy.
2. Mametraha ny lohateniny ao amin'ny lohateny
Ity iray ity koa dia tena mahasoa ho an'ny vokatra SEO kokoa, na dia nampidirina voalohany tamin'ny faran'ny 90 taona aza izy. Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana SEO dia manolotra ny fampidirana io paik'ady io amin'ny andavanandrom-pihetseham-panaon'ny SEO androany satria ny sehatry ny fikarohana dia manantena ny sasin-teny hampidirina ao amin'ny lohahevitry ny pejy.
Nandritra ny taona maro, ny hany lohan-dahatsoratra ilaina amin'ny SEO dia ny H1 sy H2. Niova ny fotoana. Amin'izao fotoana izao, misy marika 6 lohateny, manomboka amin'ny H1 ka hatramin'ny H6 - ny tsirairay dia midika fa mihena ny lanjany. H1 dia iray amin'ireo lanjany lehibe indrindra, tokony ampiharina indray mandeha isaky ny pejy, amin'ny ankapobeny ny lohatenin'ny lahatsoratra. Ny lohatenin'ny singa tsirairay dia tokony ampiharina amin'ny sokajin'io voalaza etsy ambony io.
3. Hevero ny fandefasana ireo sehatra manampahefana
Tsy misy mandà: ny rohy mandroso manatsara ny laharam-pizahanao sy ny fahefana raha toa ka ampiasaina tsara. Amin'ny teny tsotra, ny rohy mandroso dia ireo rohy izay manondro faritra hafa avy amin'ny tranokalanao. Ny fampifandraisana amin'ny tranonkala manampahefana dia manampy ny Google hahatakatra ny toetranao ary mampitombo ny kalitaon'ny tranonkalanao, izay mitana andraikitra fototra ao amin'ny seho SEO anao.
Ny fifandraisana amin'ny tranonkala manampahefana dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hifandraisana fifandraisana amin'ireo orinasa an-tserasera izay manana ny lasitra mitovy.
Ny fampiharana ny SEO ny vokatra dia tsy sarotra tahaka ny mety amin'ny voalohany. Ny fampifanarahana amin'ireo soso-kevitra voalaza etsy ambony dia hanampy anao hamorona tetik'ady SEO kokoa noho ny iray izay anananao amin'izao fotoana izao.
Raha toa ka manana fanontaniana ianao na te hizara ny teknôlôjia SEO mahomby miaraka aminay dia aza misalasala manatona ny ekipanay Semalt. Tianay ny mandre ny mpamaky!